Malalaka ny fitaovam-piadiana nokleary CYBERFESTIVAL - Ny martsa manerantany
Home » About us » Fifandraisana ofisialy » CYBERFESTIVAL Tsy misy fitaovam-piadiana niokleary
CYBERFESTIVAL Tsy misy fitaovam-piadiana niokleary
21 / 01 / 2021 ny Antonio Gancedo
Cyber ​​ara-kolotsaina manerantanyF festival TSY MISY FITAOVANA NUCLEAR dia hetsika 190 no voaangona
Ny olom-pirenenan'izao tontolo izao dia manan-jo hankalaza ny fidiran'ny Fifanekena ho amin'ny fandrarana ny fitaovam-piadiana niokleary (TPAN) izany dia hatao any amin'ny Firenena Mikambana amin'ny 22/1/2021. Tratra izany noho ny sonian'ny firenena 86 sy ny fankatoavana ny 51, izay isaoranay noho ny fahasahiany nandray ireo hery niokleary lehibe. Ao anatin'ny ICAN, fanentanana iray nampiroborobo azy ary noho izany antony izany no nahazo ny loka Nobel fandriampahalemana tamin'ny taona 2017. Androany, mihoatra ny 160 ny hetsika natao tany amin'ireo firenena manerana ny kaontinanta rehetra hanohana azy.
Iray amin'izany i CyberFestival. Izy io dia mikasa ny hanao ny anjara birikiny kely amin'ny dingana iray izay hitohy hitatra mandra-pongotra tanteraka ny fitaovam-piadiana niokleary avy amin'ny planeta ary hamadika ny pejy ho amin'ity toko maintin'ny sivilizasiôna olombelona ity.
Mandritra ny ora 10 tsy misy fiatoana, fandaharana horonan-tsary iray no halefa amin'ny alàlan'ny fantsom-pamokarana Zoom sy Facebook izay mamerina mijery ireo kaonseritra sy fety manan-tantara ho an'ny fandriam-pahalemana sy manohitra ny fitaovam-piadiana niokleary miaraka amin'ny hira, fanambarana, hetsika ary fanohanana ireo olona avy amin'ny tontolon'ny kolontsaina, fanatanjahan-tena ary sehatry ny politika, fijoroana ho vavolombelona avy amin'ireo mpandray anjara ara-tantara sy ankehitriny, fanambarana Nobel fandriampahalemana, tohana avy amin'ireo parlemantera sy munisipaly, tohana avy amin'ireo fikambanana, eny fa na ny hetsika eo amin'ny fototra sosialy ho an'ireo mafana fo, olom-pirenena tsotra, tanora ary ankizy mianatra izany dia miaraka amin'ny diaben'izy ireo, fampiratiana, hetsika an-tsokosoko, sekoly, oniversite ary mariky ny fandriam-pahalemana dia miaro izay rehetra misy ifandraisany amin'ny tontolo tsy misy ady ary, mazava ho azy, tsy misy fitaovam-piadiana niokleary.
Ao amin'io CyberF festival World Cultural FREE OF NUCLEAR WEAPONS ¡Dingana lehibe ho an'ny zanak'olombelona! Hetsika 190 no voaangona izay fikambanana ana hetsiny sy olona ana hetsiny avy amin'ny kaontinanta rehetra no mandray anjara.
andro: January 23 amin'ny 2021
ora: Hanomboka amin'ny 10:30 GMT-0 ny Cyberfestival ary hifarana amin'ny 20:30 GTM-0.
Ny sakana voalohany sy farany, maharitra adiny iray, dia natokana hanaparitahana synthesis ny hetsika andrim-panjakana manan-danja indrindra nitranga tamin'ny fidiran'ny TPAN ho an'ny foiben'ny Firenena Mikambana.
Ny 8 ora eo anelanelany dia mifanitsy amin'ny faritra 8, ny tsirairay avy dia hanomboka amin'ny fampidirana ny atiny manokana. Ny atiny dia saika ampifanarahana amin'ny faritra ara-jeografika tsirairay: Oceania-Asia sy Europe-Africa-America.
Ny sasany dia hetsika ara-tantara ary misy ifandraisany amin'ny fanekena ny hetsika sy ny fandraisana anjara nanamarika vanim-potoana iray.
Ny sasany, ny ankamaroany, dia hetsika sy fandraisana anjara natao tato anatin'ny taona vitsivitsy ho an'ny fandriam-pahalemana ary indrindra ny famongorana ny fitaovam-piadiana niokleary.
Misy programa amin'ny antsipiriany miaraka amin'ny atiny rehetra, ny fandaharam-potoana ary ny mpandray anjara.
Atiny hafa: Ho fanampin'ireo atiny voalaza etsy ambony, dia misy fanadihadiana sy fampahalalana vitsivitsy momba ny Hetsika 157 Ireo andro ireo dia ataon'ny fikambanana ICAN rehetra.
Zava-dehibe ny mampiharihary ity sehatra tantara vaovao ity. Araka ny ahafahantsika manamarina rehetra, ny fankatoavan'ny TPAN, izay iray amin'ireo hetsika manandanja indrindra eto an-tany, dia tsy eo amin'ny pejy voalohany amin'ny gazety lehibe na manokatra ny fampahalalam-baovao amin'ireo tambajotram-televiziona lehibe. Ny toe-javatra misy any amin'ny firenena maro izay nanohanan'ny governemanta sy / na nanamarina ny TPAN dia tsy fantatry ny olom-pireneny izany. Misy fikafika miafina lehibe momba an'ity olana ity amin'ny haino aman-jery. Izany no antony nanoloran-tenantsika ny hampiseho an'io zava-dehibe io eo amin'ny sehatra malaza amin'ny fomba manintona, manome azy fanaparitahana faran'izay betsaka ary manohana ny hetahetan'ny tanora tanora izay manohitra mazava tsara an'ireo fitaovam-piadiana ireo.
FORMAT SY FAMARIHANA
Raha jerena ny faharetan'ny fotoana lava dia ho voarakitra ny atiny farany hahafahany aseho amin'ny fotoana hafa arak'izay mahaliana ny tsirairay.
ORGANISATION: Na dia natolotry ny MSGySV aza ny fandraisana andraikitra, ity CyberF festival ity dia vokatry ny fiaraha-miasan'ny olona sy vondrona maro ary mandrakotra fahasamihafana lehibe eo amin'ny fifandraisana sy ny firenena.
Ny faniriana dia ny hamerina an'ity CyberF festival ity rehefa misy vondrona firenena vaovao miditra amin'ny TPAN, amin'ny fitomboan'ny fitomboana mandra-pahatongany amin'ny famongorana farany azy.
FIFANDRAISAN-TENY Avy amin'izao tontolo izao tsy misy ady sy herisetra amin'ny fidirana an-keriny an'ny TPAN
FANORENANA PRESS amin'ny COSTA RICA:
Momba ny fidirana an-keriny an'ny TPAN
Mankany amin'ny ho avy tsy misy fitaovam-piadiana niokleary
Fanomezana ho an'i Gastón Cornejo Bascopé
Navoaka ny martsa eran-tany faha-3